ဟွာဟင်းဟိုတယ် | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
Category Archives: ဟွာဟင်းဟိုတယ်
တစ်ခုက“ မနက်ဖြန်ဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူး, ဒါကငါ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ပုန်းအောင်းရာနေရာဖြစ်တယ်”
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်လယ်ထဲကကြယ်တွေကြားမှာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, အဖြူသဲကမ်းခြေ, နှင့်အပူပိုင်းဒေသအလယ်ကနေပုဂ္ဂလိကအေးမြလေပြေ. ငါအချို့အလုပ် Dao ရှိ, ဟွာဟင်သည်အပန်းဖြေစခန်း၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည့်အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိကျွန်းသစ်အဆောက်အအုံကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်. နံနက်နေထွက်ချိန်တွင် the ည့်သည်များကိုပါမောက္ခပြုရန်အိမ်နှင့်ကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ညနေခင်းရဲ့နေဝင်ချိန် til. သင်ဇိမ်ခံ Pavilion Suite တွင်လားပဲဖြစ်ဖြစ်စတူဒီယိုခန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲလား, Baan Talay Dao သည် inity ည့်ဝတ်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်. 32 သင့်ရဲ့အိပ်မက်လည်ပတ်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အဆင်သင့်အခန်းပေါင်း. ခေတ်မီစက်ကိရိယာများသည်စတိုင်ကျ။ ခေတ်မီဆန်းပြားသည်, အိမ်လိုပဲသာယာအဆင်ပြေမှုများ၊.
This entry was posted in ဟွာဟင်းဟိုတယ်, မမွငျရသောပရဒိသုဟိုတယ် and tagged ထိုင်းဟိုတယ် on မတ်လ 24, 2012 အားဖြင့် admin.